Regidron izingane - umuthi, okuyinto rehydron isixazululo elisetshenziswe kaningi amacala amanzi emzimbeni. isimo esinjalo isici umuntu uhlushwa neziqubu uhudo noma ukuhlanza. Ukwakheka izidakamizwa ezinganeni Regidron kuhlanganisa izingxenye ezifana citrate futhi sodium chloride, futhi i-potassium ne dekstaza. Lo mugqa-up eduze ezakhiweni yayo glucose, amanzi, kanye electrolyte, okuyinto e ethile ekhona emzimbeni umuntu ngamunye. Ngakho-glucose kakhulu ngcono absorbability citrates, nosawoti yalo. Ngaphezu kwalokho, kwenza ukuzinza kanye acid base ukulingana igazi. Isici esiyinhloko zomuthi okuthiwa Regidron izingane wukuthi okuqukethwe sodium yalo kuyehla, kanti osmolality encishisiwe, okwandisa kakhulu ukuphumelela izidakamizwa. Ngaphezu kwalokho, inani potassium, kuyashesha ukuzinza komzimba isici luyanda.
Rehydron izingane angabelwa kuchwepheshe lapho kudingeka ukuzinza we okuthiwa amanzi-usawoti ibhalansi, kanye nokuqedwa lactic. Lezi zinqubo zenzeka ngenxa sohudo ka izilonda ahlukahlukene kobukhulu noma ezishisayo wonke umzimba. Rehydron izingane avame ukusetshenziswa njengendlela agent prophylactic ngokumelene amanzi emzimbeni ngesikhathi ukushisa isikhathi eside futhi ukuzikhandla ngokomzimba.
Kanjani ukunikeza Regidron ingane? Okokuqala, kumelwe sikhumbule ukuthi umthamo zomuthi incike isisindo encane nesineke. Ngokuvamile, ngaphambi usebenzise enye isikhwama semali ukuncibilikisa emanzini abilayo. Engingakusho nje ilitha uketshezi. Isixazululo kwaphumela kumele kube sips ezincane Ten - imizuzu eyishumi nanhlanu ngemuva iziqubu zokuba ukuhlanza noma isifo sohudo ngamunye. Kuyaphawuleka ukuthi owokuqala nqo kunconywa ukunikeza ingane isixazululo ngesilinganiso eziyikhulu namamililitha amakhilogramu esisindo yakhe ngayinye. Emva kwalesi sikhathi, umthamo kufanele yehliswe ngama izikhathi eziyishumi. Izingane, aphakathi kweminyaka engu-iminyaka emithathu eziyisithupha, owokuqala emihlanu - amahora ayisithupha angaphuzi kungekho rehydron ezingaphezu kweyodwa ilitha. Uma ngemva kwalokho kwaba khona iziqubu entsha ukuhlanza noma okuxekethile izigqiki, kudingeka baphuze ngisho ezingamakhulu amabili namamililitha. Ungakhohlwa ukuthi emphinjeni kufanele kube encane. Yamukela i-ejenti e isamba Kunconywa emva ngamunye ukulahlekelwa uketshezi. Ukushesha uqale ukwelashwa, maningi amathuba okuthi ingane yakho uyombhubhisa izimpawu ezingemnandi ezinjalo. Ukwelapha Kunconywa ukuqhubeka cishe ezine izinsuku, kuze kube yileso sikhathi, kuze sohudo sithule.
Mhlawumbe wonke umuntu uyazi ukuthi bonke mithi ezinye Izimo. Labo futhi sibe izidakamizwa Regidron izingane. Umuthi akufanele kuthathwe uma ingane anda okuqukethwe ku-elementi umzimba ngokuthi potassium. Contraindication ukusebenzisa kwayo kubhekwa nomfutho wegazi ophezulu wesibili kanye degree lwesithathu, kanye nesifo sikashukela. Kepha-side effects, kunjalo nanamuhla awazange kubhaliswe.
OKUFANELE KUPHAWULWE ABAZALI! Esiphuthumayo, xhumana nomuntu Uyobiza i-ambulensi, uma ngemuva kokuthola lo izidakamizwa e likhuphuka ingane lokushisa (ngenhla degrees amathathu nethoba) uvele sohudo kuxutshaniswe negazi, anuria waqala Ukuwohloka ngokushesha waphawula retardation, ukukhathala ezinzima futhi ukozela.
Regidron izinsana lisetshenziswa inani elihlukile kunalelo kuchaziwe ngenhla. izidakamizwa Neonatal kumele inikezwe ithisipuni elilodwa njalo ngemva kwemizuzu eyishumi. Izinqubo ezinjalo baqhubeka amahora ayisithupha.
Medicine "Purga": laxative noma ushevu?